Ikhaya leGadi ye-Atrium ekhethekileyo eneTubhu eshushu kunye neYadi
Eli khaya lihle, litofotofo kumantla eFort Bragg libonelela ngeendawo ezahlukeneyo zangaphandle ezinokonwatyiswa ngalo naliphi na ixesha lonyaka, nokuba imozulu injani. Indawo yabucala nethuleyo imizuzu nje ukuya eGlass Beach kunye nedolophu yaseFort Bragg. Ikhaya linamagumbi okulala amabini, amagumbi amabini okuhlambela, indawo yokutyela yangaphakathi nangaphandle, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlamba impahla, ibhafu eshushu egqunyiweyo, iyadi yabucala, nokunye.
*Uhlaziyo ngo-Agasti 2021*
INqila yaseMendocino okwangoku ijongene neemeko zembalela ezigqithisileyo kunye nokunqongophala kwamanzi. Ngenxa yoku, asikwazi ukuqhubeka nokunkcenkceshela ingca kunye neegadi njengoko besiqhele ukwenza. Ingca isenokungabi luhlaza kwaye izitiya zisenokungabi ngcono ngexesha lokuhlala kwakho. Siyaxolisa ngaloo nto, nangona kunjalo sonke siyayenza indima yethu ukonga amanzi amaninzi kangangoko kuluntu lwethu. Nceda ungabhuki ngokulindela ingca eluhlaza kunye nezitiya ezikhanyayo, akunakwenzeka ngeli xesha.
Inyathelo nje ngaphandle komnyango wegumbi lokuhlala ukuze ufumane intle, enye yohlobo, i-atrium yegadi egcwele iintyatyambo unyaka wonke kunye nohlaza, i-waterfall echibini laseKoi, ukukhanya okufudumeleyo, kunye nendawo yokutyela. Nakwezona ntsuku ziselunxwemeni zibanda kakhulu, zinenkungu nelanga, iatrium ishushu, yomile, kwaye ikhululekile. Iintsuku ezinethayo ziyinto emnandi kule ndawo imangalisayo.
Ngaphambi nje kwe-atrium yiyadi yabucala eneebhedi zeentyatyambo kunye neebhentshi zokuzonwabisa ngeentsuku ezifudumeleyo. Le yindawo efanelekileyo yokuba iintsapho zonwabele ixesha ngaphandle ngelixa zigcina ubumfihlo kunye nentuthuzelo.
Kwelinye icandelo leyadi yabucala, uya kufumana ibhafu eshushu ebekwe kwindawo ekhululekileyo ye-gazebo ejonge kumlanjana omncinci, ohamba phakathi kweyadi. Le ndawo ikhuselweyo iyonwabisa ngokukhethekileyo ngeengokuhlwa ezineemvula xa amaza evakala ebetha umgama. Ngaphandle komnyango we-atrium uya kufumana i-propane grill eyakho ukuyisebenzisa ngexesha lokuhlala kwakho. Ifanelekile kwi-barbecues yasemva kwemini okanye yangokuhlwa kunye nesidlo kwi-atrium.
Indawo ezolileyo neyabucala kuphela yimizuzu emi-5 ukuya eGlass Beach kunye nedolophu, nangaphantsi ukuya kumachibi amahle kunye neelwandle eMacKerricher State Park.
Usapho lwethu luhlala kwipropathi kwaye luya kufumaneka ukunceda nangaliphi na ixesha lokuhlala kwakho ngaphandle kokuba kuphawulwe ngenye indlela.